Pokémon GO tara ahụhụ ọgụ DDoS ma gbadata n'ụwa niile | Akụkọ akụrụngwa
Pokémon GO enwetawo nsogbu DDoS ma daa n'ụwa niile
N'izu gara aga, Nintendo malitere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'enyeghị aka na ntị Pokémon GO, egwuregwu nke jikọtara eziokwu dị ukwuu na ịchụ nta Pokémon na gburugburu anyị. Na mbido ya ọ dị naanị na mba atọ: United States, Australia na New Zealand, mana na ngwụcha izu a, ụlọ ọrụ Japan bụ Nintendo amụbaala ọnụ ọgụgụ mba na England, Germany, Spain, Italy na Portugal.
Ọ na-ama jijiji na igba egbe bụ n'ihi na ụlọ ọrụ nwere gbasaa ọnụ ọgụgụ nke sava maka ọrụ ahụ agaghị emebi site na itinye mba ndi ozo ka igwu egwu. Mana ọ dị ka mbọ ụlọ ọrụ ahụ gbara na nke a adaala site na ịgọnarị ọgụ ọgụ, akpọrọ DDoS.
Ruo ọtụtụ awa, ndị egwuregwu Pokémon GO abụwo onye ọ bụla nwere nsogbu ịnweta egwuregwu ahụ. Ọtụtụ oge, egwuregwu ahụ na-agwa anyị na ọ nweela ike ijikọ na akaụntụ anyị. Na ndị ọzọ, egwuregwu ahụ na-agwa anyị na sava na-arụsi ọrụ ike nakwa na anyị ga-anwale ọzọ na nkeji ole na ole.
MGBE AH SR According: Dị ka @Indige, #PokemonGO agbadawo sava na mwakpo DDOS. Anyị ga-emelite mgbe anyị nwere ozi ndị ọzọ.
- Pokémon aga akụkọ (@PokemonGoNews) July 16, 2016
Na akaụntụ gọọmentị nke Pokémon GO, anyị nwere ike ịhụ otu ụlọ ọrụ ezigala tweet nke ha na-akọ na ha na-ata ahụhụ ọgụ DDoS. Mwakpo DDoS mejupụtara ịme ọtụtụ arịrịọ niile n'otu oge ka ndị sava ahụ ghara ịnabata ha niile ma ọrụ ahụ daa. O doro anya na ndị kpatara ọgụ DDoS a bụ ndị na-egwu ohi akpọrọ PoodleCorp.
Anyị amaghị ebumnuche nke otu ndị omekome a, mana olile anya Nintendo ga-etinye ihe ngwọta n'oge na-adịghị anya iji zere ọgụ n'ọdịnihu nke ụdị a, ọkachasị ugbu a ezumike na-abịa na ndị na-egwu egwuregwu a ga-enwe ọtụtụ oge iji nwee ọ Pụ Pokémon GO. Anyị ga-agwa gị ozi ọzọ.
Nkeji ole na ole tupu ebipụta akụkọ a, agbalịrị m netwọk Wi-Fi abụọ dị iche iche na nsonaazụ dị iche. Na a Enwere m ike ịnweta ọ bụ ezie na njikọ ahụ dị nwayọ nwayọ na nke ọzọ ọ na-agwa m na ọ nweghị ike ijikọ na akaụntụ m. Na njikọ data ọ gwara m na ọ nweghị ike ijikọ na akaụntụ m.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Pokémon GO enwetawo nsogbu DDoS ma daa n'ụwa niile
Onye nchịkọta na-achọta Nintendo 64 nke na-eji Disk Drive
AirPod ga-abụ aha Apple ọzọ ekweisi